Detoronomy 16 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 16
Ny fety lehibe mandritra ny taona - Ny mpitsara sy ny mpanjaka.
1Tandremo ny volana Abiba, ka ankalazao ny Paka, fanomezam-boninahitra an'ny Tompo Andriamanitrao, fa tamin'ny volana Abiba, raha alina, no nitondran'ny Tompo Andriamanitrao anao nivoaka tany Ejipta. 2Any amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao hamponenany ny anarany, no hamonoanao ny soron'ny Paka, amin'ny Tompo Andriamanitrao, ny ondry sy ny omby. 3Aza mihinana mofo misy lalivay miaraka amin'ireo sorona ireo fa mofo tsy misy lalivay no hano mandritra ny hafitoana, dia mofom-pahoriana, satria tamim-pahamaikana no nivoahanao tany amin'ny tany Ejipta mba hahatsiarovanao ny andro nivoahanao tany Ejipta, amin'ny andro rehetra iainanao. 4Aoka tsy hisy lalivay ao aminao amin'ny faritaninao rehetra mandritra ny hafitoana, ary aza misy avela hiloaka alina ho tra-maraina ny henan'ny sorona novonoinao tamin'ny harivan'ny andro voalohany. 5Tsy ho azonao amonoana ny soron'ny Paka avokoa tsy akory ny tanàna rehetra homen'ny Tompo Andriamanitrao anao, 6fa amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao hamponenany ny anarany ihany no hamonoanao ny soron'ny Paka, amin'ilay hariva maty masoandro iny, izay fotoana nivoahanao tany Ejipta. 7Atsatsiho ny sorona ary hano eo amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao; ary nony maraina dia modia ho any an-dainao. 8Henemana no hihinananao mofo tsy misy lalivay ary ny andro fahafito, dia hatao ny fivoriana lehibe ho fanomezam-boninahitra an'ny Tompo Andriamanitrao; tsy hanao asa na inona na inona hianao.
9Hanisa herinandro fito hianao, ka raha vao santarina amin'ny antsim-bary ny vary dia hatombokao ny fanisana herinandro fito; 10dia hankalaza ny fetin'ny Herinandro ho fanomezam-boninahitra an'ny Tompo Andriamanitrao hianao, amin'ny fanolorana an-tsitra-po avy amin'ny tànanao, araka izay nanambinan'ny Tompo Andriamanitrao anao. 11Any amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao hamponenany ny anarany no hifalianao eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao, hianao, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao, ny Levita ao anatin'ny vavahadinao ary ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena mitoetra eo afovoanao. 12Tsarovy fa efa mba andevo tany Ejipta koa hianao, ka tandremo ny hanatanteraka ireo didy ireo.
13Hafitoana no hankalazanao ny fetin'ny Tabernakla, rahefa voangonao ny vokatra avy eo am-pamoloana amam-pamiazanao. 14Mifalia amin'izany fety izany hianao, mbamin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao, ary ny Levita sy ny vahiny mbamin'ny kamboty sy ny mpitondratena ao anatin'ny vavahadinao. 15Hafitoana no hankalazanao ny fety, ho fanomezam-boninahitra an'ny Tompo Andriamanitrao any amin'ny fitoerana izay hofidian'ny Tompo, fa hambinin'ny Tompo Andriamanitra hianao, amin'ny vokatra rehetra, sy amin'ny asan-tànanao rehetra, ka dia hifaly eram-po tokoa hianao.
16Intelo isan-taona no hisehoan'ny lehilahy rehetra aminareo, eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrareo, any amin'ny fitoerana izay hofidiny, dia amin'ny fetin'ny Azima, sy ny fetin'ny Herinandro, ary ny fetin'ny Tabernakla; ka aoka tsy ho tànam-polo fotsiny no hisehoany eo anatrehan'ny Tompo, 17fa aoka samy hanatitra izay zakany avy araka ny fanambinana nomen'ny Tompo Andriamanitra azy.
18Asio mpitsara sy andriambaventy ny tanàna homen'ny Tompo Andriamanitrao anao, araka ny fokonao avy, ary hitsara ny vahoaka ara-drariny izy. 19Aza mampandefitra ny rariny, aza mizaha tavan'olona ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny mason'ny hendry sy mampivadika ny tenin'ny marina. 20Araho an-tsakany sy an-davany ny rariny mba ho velona hianao, sy hanana ny tany izay homen'ny Tompo Andriamanitrao anao.
21Aza hanangananao aserà, na hazo na inona na inona, eo andanin'ny otely, izay hatsanganao ho an'ny Tompo Andriamanitrao. 22Aza mba manao tsangam-bato izay halan'ny Tompo Andriamanitrao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0208 seconds